FAKAFAKA: mora lalaovina ny tsy miaina ny kolontsainy ! | NewsMada
FAKAFAKA: mora lalaovina ny tsy miaina ny kolontsainy !
Mahitsy be ilay fomba filaza, saingy ahafahana maneho hevitra ao anatin’ny famakafakana tahaka izao io. Ny Malagasy, manam-pahendrena. Ny Malagasy, matahotra an’Andriamanitra. Ny Malagasy, tia miray hina sy mifanampy. Ny Malagasy, tia fihavanana. Ny Malagasy, … Marobe ny voalaza momba ny Malagasy. Saika momba ny kolontsaina avokoa izy ireny.
Ny indro kely anefa, lazam-balala sisa ny fananan’ny Malagasy ireo rehetra ireo. Raha tena iainana mantsy ny fahendrena, ny fifanampiana, ny tahotra an’Andriamanitra, sns, ho sahirana ireo mpanao politika ireo satria tsy ho afa-milalao ny Malagasy intsony. Toraka izany koa ny vahiny zatra manao lalan-dririnina.
Ohatra iray azo ampiharina tsara amin’izao vanim-potoana iainan’ny firenena izao, ohatra, ilay fahaizan’ny Malagasy mandinika hevitra faran’izay lalina. Tsy mihinana amam-bolony. Henoina tsara sy dinihina ary fakafakaina lalina izay ambaran’ireo mpanao politika ireo. Amin’izay fotoana izay, sady tsy ho voafitaka no tsy ho voafahan-dalitra ny Malagasy tsirairay.
Raha hain’ny Malagasy tsara ny miaina ny kolontsainy, hiharihary eo anatrehany tanteraka ny harena be ananany. Ho fantany tsy am-pihambahambana ny fitaka bevava atao eto amin’ny taniny. Toraka izany koa ny fihatsarambelatsihy ataon’ny vahiny sasany mbola te hanohy ny fangalaran-karena sy fangoronan-karena eto Madagasikara, sns.
Tsy iandrasana famatsiam-bola avy any ivelany ny fiainana ny kolontsaina fa finiavana sy fandavantena no takina amin’ny tsirairay. Mila mifanoro, mifampitaiza, mahay mihaino ny hafa, maneho fihetsika feno fahalalam-pomba, sns. Tsy noforonina ireo fa fahendrena sy kolontsaina malagasy.
Raha mahavita izany ny Malagasy tsirairay, ho lasa lavitra ao anatin’ny fotoana fohy i Madagasikara. Tsy ho kilalaon’ny hafa intsony fa hijoro amin’ny maha izy azy !